တော်တယ်ဆိုတာ . . . ကလေးတစ်ယောက်တော်တယ်ဆိုရင် များသောအားဖြင့်တော်ခြင်းကို သတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာ စာတော်တာကိုအခြေခံပြီး သတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်။ ကလေးတစ်ယောက် တော်တယ်လို့ပြောရင် ဆရာတို့အနေနဲ့ စာပေနဲ့ပတ်သက်လို့ ကျောင်းမှာ စာသင်တဲ့အချိန်မှာ ထူးချွန်တဲ့လူဆိုတာမျိုး ဆရာတို့ပြောလေ့ရှိတယ်။ တော်တာကို ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာ ဉာဏ်ရည်ထက်တာကို ဦးစားပေးဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ...
ကြည့်ရှု့သူများ : 1199
ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ပီသအောင် ဘယ်လိုကျင့်ကြံရမလဲ။ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက် ဟုတ်မဟုတ် ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ ဒီမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး စူးစမ်းလေ့လာရာမှာ ပညာရှင်တိုင်းက သဘောတူထားတဲ့ ယေဘူယျအချက်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။၁။ သူတို့ထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး တစ်ပါးသူကို ဝေဖန်ခွင့်ပေးတယ်။ခေါင်းဆောင်ကောင်းတိုင်းဟာ ဉာဏ်အမြော်အမြင်နဲ့ ပြည့်စုံပါတယ်။ ဒါပေမယ့်...
ကြည့်ရှု့သူများ : 1351
ဆွေးနွေးမှုများ : 12
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်စွမ်းရှိစေဖို့ လိုက်နာသင့်တဲ့အချက် ၇ ချက်
၁ - ပြီးပြည့်စုံခြင်းထက် တိုးတက်မှုရှိခြင်းကို အာရုံစိုက်ပါကိုယ့်အပြုအမူပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှု တစ် ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်ဆိုတာကလည်း လက်ခံနိုင်လောက်စရာအကြောင်းတရားပါပဲ။ အရင်ကလုပ်ခဲ့သမျှကို ပြောင်းပြန်လှန်လိုက်သလို အရာရာကိုချက်ချင်းပြောင်းလဲ စတင်လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ဆိုတာကို သိပ်ပြီးအာရုံမထားပါနဲ့။ တိုးတက်မှုအနည်းငယ်ကိုသာ အလေးထားပါ။၂ - ကိုယ်ဖြစ်နေတဲ့...
ကြည့်ရှု့သူများ : 2074
Android and Windows users haveareason to celebrate: Soon, you'll be able to join your iPhone-wielding friends on FaceTime calls. Apple revealed the news at its annual Worldwide Developers Conference on Monday, alongsideanumber of other updates to iOS, iPadOS and MacOS.&nbsp;FaceTime is getting several upgrades in the upcoming iOS 15 operating s...
ကြည့်ရှု့သူများ : 2220
ဆွေးနွေးမှုများ : 2
မန်နေဂျာများအတွက် ဆွန်ဇူးရဲ့စစ်ဆင်ရေးပညာ&nbsp;ဆွန်ဇူးက ဒီလိုမိန့်ဆိုပါတယ်ကျွနုပ်တို့ဟာ ရန်သူရဲ့အနေအထားတွေ၊ တပ်သားတွေကို ဖြန့်ကျက်ချထားပုံတွေကို သိအောင် လုပ်ကြရမယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ကတော့ ရန်သူမမြင်နိုင်အောင်နေကြရမယ်။ ဒီနည်းအားဖြင့်&nbsp;ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့တပ်များကို စုစည်းထားနိုင်သွားမှာဖြစ်မယ်။ ရန်သူကိုတော့ တကွဲတပြားစီ ဖြစ်နေအောင် လုပ်သွားရမယ်။ က...
ကြည့်ရှု့သူများ : 2164
ဖတ်ပါ၊ မှတ်ပါ၊ အတုယူပါ (ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှု)
ဖတ်ပါ၊ မှတ်ပါ၊ အတုယူပါ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ၊ ဇူလိုင်လနဲ့ အောက်တိုဘာ လထုတ် မဂ္ဂဇင်းတွေထဲမှာ ဆောင်းပါးတွေ ရေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ ၂၀၁၀ ၊ မေလက ထုတ်ခဲ့တဲ့ မြန်မာတိုင်းမ် အထူးထုတ် အချပ်ပိုမှာပါရှိတဲ့ 'ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှု' အကြောင်းကို မျှေ၀ အသိပေးလို စိတ်နဲ့ ဒီဆောင်းပါးကိုရေးဖြစ်ပါတယ်။လူသားရင်းမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှု အရေးပါခြင်းမြန်မာတိုင်းမ်က...
ကြည့်ရှု့သူများ : 2058
1 -6of ( 156 ) records